News - Car Engine Valve ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအင်ဂျင်အဆို့ရှင် လည်ပတ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပြင်းထန်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သည်။ အဆို့ရှင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၈၀၀ reach အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ချောဆီကိုအဆုံးတွင်အဆို့ရှင်အလုပ်နှင့်အဖွင့်အပိတ်ပိတ်သည့်အခါမကြာခဏအဆို့ရှင်များသည် ပျက်စီးမှုကိုထုတ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်လည်ပတ်နေမှုကိုသေချာစေရန်ပြုပြင်ခြင်း၏အဆို့ရှင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
1. Valve စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်
(၁) အဆို့ရှင်၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ပင်စည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆို့ရှင်အဆုံးကိုပုံပျက်သောသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောအခါပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ပါ။ အဆို့ရှင်မျက်နှာကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။
(2) အထူလျှင်အဆို့ရှင်ကိုအစားထိုးပါ ကားအင်ဂျင်အဆို့ရှင် ကန့်သတ်တန်ဖိုးထက်လျော့နည်းသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အခါအဆို့ရှင်တစ်ခုချင်းစီ၏အဆုံးကိုကြည့်ခြင်း၊
(၃) အဆို့ရှင်တစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းခွင်မျက်နှာပြင်နှင့်ပင်စည်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ၀ တ်ရန်၊ ပုံပျက်ရန်စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါကအစားထိုးပါ။
(4) အဆို့ရှင်အဆုံး deflecton နဲ၏ကန့်သတ်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း - ၀ င်ပေါက်အဆို့ရှင်အတွက် ၀.၁ မီလီမီတာ၊ အဆို့ရှင်အတွက် ၀.၁ မီလီမီတာ၊ အဆို့ရှင်၏အထူ၏စံတန်ဖိုး - စားသုံးမှုအဆို့ရှင်အတွက် ၁.၀ မီလီယံ၊ သုံးစွဲမှုအကန့်အသတ် - စားသုံးမှုအဆို့ရှင်အတွက် ၀.၇ မီလီမီတာ၊
(5) အဆို့ရှင်ကွေးကိုတိုင်းတာရန်မိုက်ခရိုမီတာနှင့် V-frame ကိုသုံးပါ။ အဆို့ရှင်ပင်စည်ကို V-frames နှစ်ခုအကြားအကွာအဝေး ၁၀၀ မီလီမီတာတွင်ထောက်ခံသည်။ ထို့နောက်ကွေးခြင်းကိုအဆို့ရှင်အလျား၏ ၁/၂ တွင်မိုက်ခရိုမီတာဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ခွင့်ပြုထားသောကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွန်ပါကလက်စွဲစာနယ်ဇင်းနှင့်တည့်မတ်သင့်သည်။
အဆို့ရှင်ပရိသ၏ 2. ဖယ်ရှားရေး
အဆို့ရှင်ရထားကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်၊ နွေ ဦး သည်ကြို။ တင်ထားသည့်အနေအထားသို့ရောက်လျှင်၊ မလျောက်ပတ်စွာဖြုတ်ပါက၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ခလုတ်ကိုဖြုတ်သည့်အခါပုံမှန်လည်ပတ်မှုပြုလုပ်ရန်အထူးအဆို့ရှင်ရေစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများအင်ဂျင်အဆို့ရှင်ရထား၏ဘေးကင်းလုံခြုံ disassembly သေချာစေရန်အလို့ငှာအဆို့ရှင်ရထား။ သော့ခတ်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်နွေ ဦး ကို Spring remover ဖြင့်ကြိုတင်ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ဖိအားပေးသည်။ ထို့နောက်နွေ ဦး ကိုအပြည့်အဝသက်သောင့်သက်သာမရှိသောအနေအထားမရောက်မှီအထိနွေ ဦး နှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းအနားယူပါ။
Valve ထိုင်ခုံကွိုင် 3.Replacing
အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံ၏အလုပ်လုပ်သောမျက်နှာပြင်သည်အဆို့ရှင်နှင့်ထိုင်ခုံများအကြားပုံမှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော reaming သို့မဟုတ် grinding အကြိမ်ကြိမ်ပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသည်။ အကယ်၍ အဆို့ရှင်၏မျက်နှာပြင်သည် ၁.၅ မီလီမီတာအဆို့ရှင်၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိပါကအဆို့ရှင်အ ၀ တ်အစားကိုအစားထိုးသင့်သည်။ မီလီမီတာ, အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံကော်လာအစားထိုးရပါမည်။ အစားထိုးနည်းလမ်း - ထိုင်ခုံကော်လာအဟောင်းကိုဆွဲထုတ်ရန်အထူးကိရိယာများကိုသုံးပါ။ ထို့နောက် ၀ ဒိုက်ထရိုဂျင်တိုင်ကီအတွင်းရှိအပေါက်တွင်းနှင့် ၀. ၀.၅၅ မှ ၀.၅၅ မီလီမီတာအကြားအနှောက်အယှက်ရှိသောထိုင်ခုံကော်လာအသစ်ကိုထားပါ။ ပြီးနောက်ဆလင်ဒါခေါင်းအပေါက်၏ထိုင်ခုံသို့ ၀ င်ပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်အပူပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆလင်ဒါ၏ထိုင်ခုံအပေါက်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ blowtorch သို့မဟုတ် gas torch ဖြင့်အပူပေးသည် (လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု - ဆလင်ဒါခေါင်းကိုအပူမပေးမီ၊ ထိုင်ခုံတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်အဖြူရောင်မြေဖြူတွေသုံးပြီးအမှုန့်များကိုအသုံးချပြီး ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူပေးပါ။ အဖြူရောင်အမှုန့်သည်အဝါရောင်ပြောင်းသည်။ ထို့နောက်ထိုင်ခုံလက်စွပ်ကိုလျင်မြန်စွာထိုးသွင်း။ လေထဲတွင်အေးစေသည်။